अंग्रेजी कसरी सिक्ने ▷➡️ Postposmo | पोस्टपोस्ट
अंग्रेजी कसरी सिक्ने
आइरिस गेमन | 22/05/2022 10:00 | जिज्ञासा
हाम्रो देशमा, हामी सानैदेखि विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाइन्छ। जब हामी विद्यार्थी चरण समाप्त गर्छौं र हामीले वास्तविक संसारको सामना गर्नुपर्छ, हामी सबै यस भाषाको प्रवाह र निपुणताको समान स्तरको साथ बाहिर आउँदैनौं।
अंग्रेजी सिक्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हाम्रो जीवनको केहि क्षेत्रहरूमा बढ्दो रूपमा उपस्थित छ, हामी यो भाषा बोलिने विदेशी देशमा यात्रा गर्दा मात्र होइन, तर कामको वातावरणमा यो अधिक र अधिक बारम्बार प्रयोग गरिन्छ।
त्यसैले, आजको पोस्टमा, हामी जाँदैछौं कसरी छिटो र रमाइलो तरिकाले अंग्रेजी सिक्ने भन्ने बारे सुझावहरूको श्रृंखला दिएर तपाईंलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामीमध्ये धेरैजसोसँग बस्न र प्रभावकारी तरिकामा नयाँ भाषा सिक्नका लागि समय समर्पण गर्नको लागि दिनको सही घण्टा छ।
यस बारे चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईलाई अंग्रेजी सिक्नको लागि पालना गर्न सक्ने केही सुझावहरू मात्र दिनेछौं, तर हामी पनि गर्नेछौं। हामी धेरै अनुप्रयोगहरू सिफारिस गर्नेछौं जसको साथ यो धेरै रमाइलो हुनेछ यस भाषाको सिकाइ वा सुदृढीकरण।
1 अंग्रेजी सिक्नको लागि आवश्यक सुझावहरू
1.1 अध्ययन गर्न समय लिनुहोस्
1.2 हेरेर होइन सुनेर सिक्नुहोस्
1.3 अंग्रेजी सोच्नुहोस्
1.4 छोटो अवधिको लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
2 अ learn्ग्रेजी सिक्नको लागि अनुप्रयोगहरू
2.3 केक: दैनिक नयाँ पाठ
2.5 बीबीसी सिकाउने अंग्रेजी
अंग्रेजी सिक्नको लागि आवश्यक सुझावहरू
400 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूको मातृभाषाको रूपमा यो भाषा बोल्नेहरूको संख्यामा विश्वको शीर्ष तीनमा पर्छ। आजकल, हामीले यस प्रकाशनको सुरुमा टिप्पणी गरिसकेका छौं, अङ्ग्रेजी सिक्नु र निपुण हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ.
यस सिकाइ प्रक्रियामा तपाईलाई मद्दत गर्न, हामी तपाईसँग साझा गर्न जाँदैछौं आवश्यक सुझावहरूको श्रृंखला ताकि यो भाषा सिक्नु अधिक सहनशील र प्रभावकारी छ।
अध्ययन गर्न समय लिनुहोस्
आधारभूत सल्लाह जुन तपाईंले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ कि हरेक दिन कम्तिमा एक वा दुई घण्टा अध्ययन गर्न समर्पण गर्न सम्भव हुँदैन, तर तपाईंले धेरै थोरै सिक्नको लागि समय लिनु पर्छ। तपाईं शब्दावली कार्ड, conjugations, क्रिया, आदि बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यस्त दिन पछि उपलब्ध हुने थोरै समयको लागि तपाइँलाई मनोरञ्जन गर्ने गतिविधिहरू।
हेरेर होइन सुनेर सिक्नुहोस्
जब तपाईं हुनुहुन्छ नयाँ भाषा अध्ययन गर्नु भनेको सुन्नु हो, हेर्नु होइन। विद्यालयहरूमा, तिनीहरूले हामीलाई सधैं चलचित्रहरू, कार्यपत्रहरू, अंग्रेजीमा पुस्तकहरू, आदि देखाउँछन्। जुन हामी मध्ये धेरै को लागी केहि हद सम्म जटिल हुन सक्छ।
सुन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मध्ये एक हो जुन हामीले तपाईंलाई यो सूचीमा दिनेछौं यदि तपाईंले के खोज्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ भाषा सिक्नु हो। विभिन्न अडियोभिजुअल सामग्री सुन्नको लागि धन्यवाद, तपाइँ सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ शब्दावली, अभिव्यक्ति, व्याकरणीय सूत्र, आदि।
जब तपाईं अगाडि जानुहुन्छ र तपाईंको स्तर बढ्दै छ, हामी तपाईंलाई अंग्रेजीमा सोच्ने प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छौं। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं कफी पिउनको लागि क्याफेटेरियामा जानुहुन्छ भने, यसलाई स्पेनिसमा सोध्नुहोस्, तर भित्र तपाईं त्यो वाक्यांश अंग्रेजीमा कसरी तयार हुन्छ भनेर सोच्नुहोस्।
यो सुरुमा अलि जटिल हुन सक्छ, यो सामान्य छ, केहि अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ तपाईंले सोचिरहनुभएको वाक्य नोटबुकमा लेख्नुहोस् यदि तपाइँ यसलाई सही वा गलत कन्जुगेट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्न। ती शब्दहरू लेख्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ जुन हामीले कसरी भन्न जान्दैनौं।
छोटो अवधिको लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
एजेन्डा पाउनुहोस्, र छोटो अवधिको लक्ष्यहरूको सूची व्यवस्थित गर्नुहोस्। हप्तामा एक पटक बस्नुहोस् र अर्को सात दिनको लागि के लक्ष्यहरू सेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ योजना बनाउनुहोस्। एकचोटि तपाईंले ती सीमाहरू चिन्हित गरिसकेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई पुग्न र आफूसँग सन्तुष्ट हुनको लागि सम्भव सबै गर्नुहुनेछ।
समय र आफ्नो स्तर बढ्दै जाँदा, यी लक्ष्यहरू समयसँगै विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यो हो, तपाईं योजना एक हप्ता देखि दुई वा एक महिना सम्म जान सक्नुहुन्छ। यो तपाईंले आफ्नो विकासको आधारमा आफैले निर्णय गर्नुपर्छ।
अ learn्ग्रेजी सिक्नको लागि अनुप्रयोगहरू
त्यहाँ चार मात्र छन्, हामीले अघिल्लो खण्डमा दिएका सुझावहरू, तर तिनीहरू पर्याप्त भन्दा बढी छन् प्रभावकारी रूपमा अंग्रेजी सिक्ने आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, तपाईंले भर्खरै यो गर्न चाहनु पर्छ र आफैलाई सबै दिनुपर्छ।
यस सिकाइ प्रक्रियामा तपाईंलाई मद्दत गर्न, यस बिन्दुमा तपाईंले एउटा सूची पाउनुहुनेछ अंग्रेजी सिक्न विभिन्न अनुप्रयोगहरू जुन मनोरञ्जन मात्र होइन, कार्यात्मक पनि हो। तिमी पढ्दैछौ भन्ने पत्तै हुँदैन ।
रमाईलो, प्रभावकारी र नि: शुल्क तरिकामा अंग्रेजी सिक्नुहोस्। यो अनुप्रयोग प्रस्ताव गर्दछ छोटो पाठ जसको साथ तपाईले अंक प्राप्त गर्नुहुनेछ र नयाँ स्तरहरू अनलक हुनेछन् सिक्दै। यी सबै, वास्तविक संसारमा आफ्नो संचार कौशल विकास गर्दा।
पाठ्यक्रमहरू जुन तपाईंले यो अनुप्रयोग भित्र पाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंले रोजेको भाषा पढ्न, सुन्न र बोल्न सिकाउँछन्, यो सबै प्रभावकारी र प्रभावकारी तरिका मार्फत अभ्यास मार्फत। एउटा एप्लिकेसन भएकोले जुन खेल जस्तो लाग्छ जहाँ तपाइँ चुनौतिहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, यसले यसलाई महसुस नगरी घण्टा बिताउँछ र सिक्ने बानी अधिक सहन योग्य छ।
को पाठहरू हामी प्रत्येकको लागि सही स्तरमा पूर्ण रूपमा अनुकूल छन् कृत्रिम बुद्धिमत्ता र भाषा विज्ञानलाई धन्यवाद। Duolingo सँग सिक्नले तपाइँको सीप विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।
Babbel लाई धन्यवाद, छोटो समयमा एक भाषा सिक्न सम्भव छ। चाहे तपाइँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाइँको अङ्ग्रेजीको ज्ञानलाई ताजा गर्न चाहानुहुन्छ, वा यदि तपाइँ स्क्र्याचबाट सुरु गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो अनुप्रयोग छ व्यायाम र गतिविधिहरु को एक विस्तृत विविधता अनुकूलित तपाईंको लक्ष्यमा पूर्ण रूपमा।
कुल 150 शिक्षण पेशेवरहरू प्रत्येक पाठ्यक्रमलाई तपाइँको सिकाइको स्तरमा अनुकूलन गर्न जिम्मेवार छन्। द तपाईंले यी पाठ्यक्रमहरूमा फेला पार्न सक्ने सामग्री मौलिक हो, अर्थात्, स्क्र्याचबाट सिर्जना गरिएको हो चयन गरिएको भाषाको मूल वक्ताहरूद्वारा, जसले एक मिनेटदेखि एक अद्वितीय र समृद्ध अनुभवको ग्यारेन्टी दिन्छ।
तपाईंले लाइभ कक्षाहरू, पोडकास्टहरू, खेलहरू, केस स्टडीहरू, अन्य धेरै बीचमा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले व्याकरण र शब्दावली दुबै मास्टर गर्नुहुनेछ धेरै छोटो समयमा।
केक: दैनिक नयाँ पाठ
यो पहिले नै संसारभरका लगभग 100 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरिसकेका छन्, जसको साथ तिनीहरूले अंग्रेजी सिक्छन् यसको दैनिक पाठहरूको लागि धन्यवाद। यो अनुप्रयोग, सिक्ने प्रक्रिया बनाउन छोटो भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहोस् यो नयाँ भाषा को केहि अधिक सहन योग्य साथै रमाइलो।
यस प्लेटफर्म भित्र, तपाईंले Youtube अडियोभिजुअल सामग्री अनुप्रयोगमा प्रत्यक्ष लिङ्कहरू फेला पार्नुहुनेछ। तपाईंले शब्दावली, अभिव्यक्ति र संयोजनहरू सिक्नुहुनेछ आफ्नो मनपर्ने भिडियो, चलचित्र वा श्रृंखला मार्फत।
थप रूपमा, तपाईंले आफूलाई सबैभन्दा बढी चासो लाग्ने विषयहरू छनोट गर्न र तिनीहरूका पाठहरू मार्फत थोरै-थोरै अध्ययन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। साथै, यो एपले तपाईंलाई परिचय दिन्छ वास्तविक कुराकानीमा बोल्ने र सुन्ने दुवै अभ्यास गर्ने सम्भावना.
यो नयाँ विकल्प जुन हामीले तपाईलाई अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि ल्याएका छौं, यसको उत्तम संयोजन प्रयोग गर्दछ विभिन्न शिक्षण विधिहरू जस्तै चलचित्रहरू, प्रसिद्ध व्यक्तिहरू र चलचित्रहरू। त्यति मात्र होइन, यसले मेम्सको प्रयोग पनि गर्छ जुन हामी सबैलाई रमाइलो तरिकाले सिक्न थाहा छ।
EWA, समावेश गर्दछaठूलो पुस्तकालय जहाँ हजारौं अनुवाद, ट्रान्सक्रिप्शन र उच्चारण पुस्तकहरू सङ्कलन गरिन्छ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई प्रसिद्ध पुस्तकहरू र अडियोबुकहरू सुन्दै वा पढ्दै गर्दा तपाईंको शब्दावली बढाउने सम्भावना प्रदान गर्दछ।
हामीले तपाईलाई बताउनुपर्छ कि यो अनुप्रयोगले क्लासिक विधिको साथ सिक्न मद्दत गर्दछ, तर एकै समयमा मनोरञ्जन गर्नको लागि घण्टा बित्छ यो महसुस नगरी। केवल प्रसिद्ध चलचित्र, शो र श्रृंखला को स्निपेट हेर्नुहोस्। रमाईलो पात्रहरूले तपाईंलाई के भन्न, कसरी र कहिले भन्ने सिकाउनेछन्।
बीबीसी सिकाउने अंग्रेजी
बीबीसी लर्निंग अंग्रेजी को आधिकारिक आवेदन, जहाँ एक पूर्ण प्याकेजमा विभिन्न पाठ र मनोरञ्जन पात्रहरू पत्ता लगाउनुहोस्। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर, तपाइँ एक अद्भुत तरिकामा सामेल हुनुहुनेछ जहाँ तपाइँ अंग्रेजी राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ, व्याकरणको अध्ययन गर्नुहुनेछ, तपाइँको उच्चारण सुधार गर्नुहुनेछ, अद्वितीय अभिव्यक्तिहरू सिक्नुहुनेछ, आदि।
प्रयोगकर्ताहरूको लागि ए अङ्ग्रेजीको निम्न स्तर, एपले अंग्रेजी मेरो बाटो परिचय गराउँछ तिनीहरूलाई समर्पित खण्ड। अर्कोतर्फ, तपाईंले ब्रिटिश च्याट पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं कुराकानीलाई अझ स्वाभाविक रूपमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
बीबीसी लर्निङ अङ्ग्रेजीद्वारा प्रस्तुत गरिएको एउटा नयाँ कुरा हो कि यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ आफ्नो मोबाइल उपकरणमा अडियो कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् र जहाँ र जब तपाईं चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई सुन्नुहोस्। तिनीहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सम्पर्कहरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम हुनुको अतिरिक्त।
आज बजारमा अंग्रेजी सिक्नको लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू मध्ये एक र पूर्ण रूपमा नि: शुल्क। मा केन्द्रित छ सुन्ने समझको सन्दर्भमा धेरै मानिसहरूसँग समस्याहरू छन्। यसले तपाईंलाई चलचित्रहरू, शृङ्खलाहरू, गीतहरू वा लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको धेरै छोटो भिडियोहरू मार्फत अनौपचारिक अंग्रेजी धेरै छिटो सिक्न र बुझ्न सिकाउँछ।
पनि मानिन्छ नयाँ शब्दहरू जान्न र सिक्नको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू मध्ये एकयस भाषामा मुहावरा र हितोपदेशहरू। तिनीहरूको अनलाइन कार्यक्रमहरूको साथ, तपाईंले ब्रिटिश र अमेरिकी जस्ता विभिन्न उच्चारणहरू बुझ्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एक खेल जस्तै, तपाईं जस्तै Wannalisn तपाईं अग्रिम र स्तरहरूमाथि विजय हासिल गर्नाले तपाईंलाई विश्वव्यापी लिडरबोर्डमा राख्छ तपाईलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि। यस अनुप्रयोगको साथ अंग्रेजी सिक्न सजिलो, रमाइलो, सरल र धेरै छिटो छ।
तपाईंले देख्नुभएको छ, त्यहाँ अनन्त रमाइलो र कार्यात्मक अनुप्रयोगहरू छन् जसको साथ तपाईंले अंग्रेजी सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ मनोरञ्जनात्मक र प्रभावकारी अध्ययन विकल्पहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि अनुप्रयोगहरूले तपाइँको सिकाइ विकासमा मद्दत गर्नेछ।
हामी तपाईंलाई एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुका साथै परम्परागत व्याकरण अभ्यासहरूमा भर पर्न सल्लाह दिन्छौं, जस्तै कि तपाईंले यस विषयमा विशेष पुस्तकहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। उत्साहित हुनुहोस् र यो महत्त्वपूर्ण भाषा फेरि लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » जिज्ञासा » अंग्रेजी कसरी सिक्ने
हिप हप के हो